ZoomInfo: Mee ngwa ngwa B2B pipeline gị na data ụlọ ọrụ dịka ọrụ (DaaS) | Martech Zone
ZoomInfo: Mee ngwa ngwa B2B pipeline gị na data ụlọ ọrụ dịka ọrụ (DaaS)
Tọzdee, Nọvemba 4, 2021 Tọzdee, Nọvemba 4, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-eresị ka ulo oru, ị maara otú ike ọ bụ ịhụ gaje ụlọ ọrụ na soro ala mkpebi-eme n'ebe ahụ… ka naanị ịghọta ha ebumnobi n'ezie ịzụta. Ndị na-ere ahịa B2B bụ ụfọdụ sleuths dị ịtụnanya, na-akpọ oku mgbe oku na kọntaktị ime na mpụga ha wulitela mmekọrịta iji mata ndị ezigbo mmadụ na ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị - n'oge kwesịrị ekwesị.
Ozi mbugharị emebela ndị isi n'ụwa niile Data dị ka Ọrụ (DaaS) ikpo okwu iji kwado atụmatụ ịga-ahịa gị ebe ọ bụla gị ma ọ bụ ndị ahịa gị nọ n'ụwa. Ha firmographic nchekwa data na-agụnye:
Ndekọ ụlọ ọrụ nde 106
Ndekọ kọntaktị nde 167
140 nde adreesị ozi-e
50 nde ọnụọgụ ọkpụkpọ ozugbo
Nọmba ekwentị 41 nde
31,000 teknụzụ akọpụtara
Nke a abụghị ndepụta kwụ ọtọ… na-emelite ndekọ ndekọ kọntaktị karịrị 100 nde kwa ụbọchị site na netwọkụ na-eto eto nke ndị nkwado afọ ofufo na-akwado ma ọ bụ tinye ozi ọhụrụ. Ịmụ igwe (ML) na nhazi asụsụ okike (NLP) na-etinyekwa ya iji weghara data sitere na ihe karịrị nde 38 ntanetị kwa ụbọchị - gụnyere weebụsaịtị ụlọ ọrụ, akụkọ akụkọ, ntinye akwụkwọ SEC, na ntinye ọrụ. Ha nwekwara ihe karịrị ndị ọrụ 400 na-enyocha ma kwalite ngwa nyocha ha na algọridim maka ịba ụba nke ziri ezi ruo ihe karịrị 90% yana ọnụego egwuregwu nke 99.8%.
Iji ya Ozi mbugharị'S ikpo okwu, gị ụlọ ọrụ nwere ike inyocha, lekwasịrị, na iru kacha mma B2B atụmanya. A na-amata mkpuchi, izi ezi na omimi nke ZoomInfo dị ka nke kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ. Ngwọta ndị a ga-enyere ndị otu ịre ahịa na ndị na-ere ahịa aka ịbawanye ahịa site n'ibelata oge gị iji mechie yana ịbawanye ego gị na nso nso. Ikpo okwu gụnyere:
ọgụgụ isi - Kọwaa ahịa gị, chọpụta ezigbo ndị na-azụ ahịa, soro ebumnuche onye zụrụ, wee nyochaa oku, nzukọ, na ozi-e iji nyochaa usoro gị maka mmelite.
njikọ aka - ngwa ala dị mfe iji na-emezi mgbasa ozi yana jikọọ na ndị na-azụ ahịa n'ofe ọwa gị kachasị mkpa, gụnyere email, ekwentị na nkata webụsaịtị.
Orchestration - na-ebuli nrụpụta ahịa site n'ịkwalite usoro ntuziaka dabere na mmemme mpụta na nke ime dị mkpa.
Atụmatụ Platform ZoomInfo gụnyere
Kpọtụrụ & Ọchụchọ ụlọ ọrụ - Kọwaa ahịa, chọpụta ezigbo ndị na-azụ ahịa
Ebumnuche onye zụrụ - Nweta atụmanya dị njikere ịzụrụ
ọgụgụ isi mkparịta ụka - Nyochaa mmekọrịta ọ bụla
ọgụgụ isi mmekọrịta - Nweta kọntaktị na kọntaktị
Data-dị ka-a-ọrụ - Mee ka atụmatụ data dị n'otu rụọ ọrụ
Ahịa akpaaka - Meziwanye ozi ekwentị na ozi-e
Mkparịta ụka webụsaịtị - Chọpụta na ụzọ ndị ruru eru
Mgbasa ozi Dijitalụ - Chekwaa ndị na-ege ntị ahaziri ahaziri
Azụmahịa – Kicksstart aga-ahịa ihe omume
Nduzi ndu - Tinye data na ozugbo
Mmekọrịta - Tinye data kacha mma na klaasị n'ime ọtụtụ ngwa gụnyere Salesforce, MS Dynamics, na Hubspot.
Nzuzo data, nghọta, na nnabata
Ozi mbugharị na-akwado nke ọma na nnweta, njigide, na idobe data ụlọ ọrụ B2B:
ZoomInfo bụ asambodo ISO 27001, anyị na-ejikwa nzuzo na nchekwa data akpọrọ ihe. Anyị na-agbaso iwu siri ike iji hụ na data anyị na-anakọta na-agbaso iwu kachasị ọhụrụ mgbe niile. Anyị nwekwara ikike nkeonwe na EU-US na Switzerland-US Shield Shield frameworks. Usoro mbufe data anyị na-akwado ihe ndị European Union, United Kingdom, Switzerland, yana United States chọrọ.
Koodu obodo ZoomInfo
ZoomInfo bụ onye ndu na sọftụwia aga-ahịa ọgbara ọhụrụ, data na ọgụgụ isi maka ụlọ ọrụ karịrị 20,000 n'ụwa niile.
Bido Nnwale ZoomInfo gị efu
Nkpughe: Ana m eji njikọ agbakwunyere m na edemede a.
Tags: b2bb2b ebu n'obinjem onye zụrụ b2bdata b2bb2b data ndakọrịtab2b nyochadata teknụzụ b2bdata azụmahịaozu ahia nzubeasịwo njemdata ụlọ ọrụmkparịta ụka ọgụgụ isidaasdata dị ka ọrụntinye datadigital mgbasa ozifirmographic dataokpokoroiso 27001ndu amụbams dynamicsdata na-atụ anyammekọrịta ọgụgụ isiakpaaka ahịantinye akaire ahiaịre ọchichiahịa na-arụ ọrụndị ahịamkpokọta nkatazoominfo
Hey DAN: Otu olu ka CRM nwere ike isi mee ka mmekọrịta gị na ire ere dịkwuo mma ma mee ka ahụ gị dị mma
Voucherify: Jiri atụmatụ efu nke Voucherify malite nkwalite ahaziri onwe ya